“Lacagta u soo Noqonaysa Kiraystaha” Lacagta Canshuurta Guryaha ka soo Noqota | LawHelp Minnesota
“Lacagta u soo Noqonaysa Kiraystaha” Lacagta Canshuurta Guryaha ka soo Noqota
Waxaa maxay lacagta u soo noqonaysaa kiraystahu (Lacagta Canshuurta Guryaha Ka Soo Noqota)?
Qaar badan oo ka mid ah kirystayaasha iyo mulkiilayaasha guryaha lehi waxa ay heli karaan lacag uga soo noqota sannad walba gobolka Minnesota. Cadadka lacagta ah ee kuu soo noqonayaa waxa uu ku xiran yahay: inta ay ahayd kirada ama canshuurta guryaha ee aad bixisay, dakhligaaga iyo inta qof ee aad mas’uulka ka tahay.
Ciddee ayaa heli lacagta soo noqonaysa?
Waxa aad heli kartaa lacag kuu soo noqota hadii:
Aad guri kiro ah ku jirtay dakhliga guud ee qoyskaaga ee sannadka 2020 uu ka yaraa $62,960 (xaq u yeeladka dakhliga ku xiran kor buu sii aadaa mar walba ay sii korodho dadka canshuurta lagu xareystaa)
Aad adigu guriga aad ku jirto aad leedahay dakhligaaga guud ee qoyskaaguna sannadka 2020 uu ka yaraa $116,180 (xaq u yeeladka dakhliga ku xiran kor buu sii aadaa mar walba ay sii korodho dadka canshuurta lagu xaraystaa) iyo
Aadan ahayn qof uu canshuurta-celinta dowlada dhexe uu ku xaraystay qof kale sannadkii 2019, iyo
Aad 2019 sannadka oo dhan ama sannad qaybtii aad deganayn Minnesota iyo
Aad kiro ka bixisay dhisme la canshuuray AMA aad gurigaaga aad adigu leedahay.
Ogow: Hadii aad guri leedahay waa KHASAB inaad leedahay lambar sooshal sakuurati (social security) oo sax ah si aad u hesho lacagta canshuurta guryaha ka soo noqota.
Siddee ayaan ku helaa lacagta ii soo noqonaysa?
Hadii guriga aad ku jirtaa uu kiro yahay, qolada guriga iska lehi waa khasab inay ku siiyaan Warqad ay ku qoran Kirada la Bixiyey (CRP) ugu dambayn bisha Janaayo 31, 2021. Hadii aad guriga adigu leedahay, isticmaal Oraahdaada Canshuurta Dhulka.
Hel foomka canshuurta ee la yiraa foomka 2020 M-1PR (2020 Form M-1PR), Lacagta Canshuurta Dhulka la Degan yahay ka soo Noqota (dadka guriga leh) iyo kan Kiraystaha Lacagta Canshuurta Guriga ugu soo Noqonaysa. Waxa aadna ka heli kartaa foomamkaa maktabadaha, wac khadka (651) 296-3781, ama warqad ugu dir ciwaanka ah: (MN Tax Forms, Mail Station 1421, St. Paul, MN 55146-1421).
Sidoo kale waxa aad ka heli kartaa foomamka oo dhan iyo akhbaarta la xaraysanayo shabakada (online) www.revenue.state.mn.us.
Hadii aad doonayso inaad ku xareysato warqadaha boostada caadiga ah, buuxi foomka, ku lifaaqan warqada kirada la bixiyey (CRP) hadii aad guriga kiraysatid ka dibna dir. Marka ugu dambaysa ee la xareysan karaa waa bisha Ogoosto 15, 20121. Ku hagaaji ciwaanka ah:
St. Paul, MN 55145-0020.
Waa inaad ku hesho lacagta kuu soo noqonaysa 90-cisho gudahood ka dib Ogoosto 15.
Waxaa aad ku heli kartaa lacagta kuu soo noqonaya ilaa 30-cisho ka hor waqtiga aad caadiyan heli lahayd hadii aad kumbuyuutarka ku xareysato aadna sameyso waxyaahan soo socda;
Xareyso ugu dambayn bisha Abriil 30keeda hadii aad guriga adigu leedahay. Xareyso ugu dambayn bisha Luulyo 31keeda hadii aad guriga aad ku jirto aad kireysato ama aad leedahay guryaha la qaado ee hadna meesha la qotomiyo.
Aad doorato in lacagta bangigaaga laguugu rido. Taa macaheedu waa in toos lacagta laguugu rido bangigaaga.
Aad xareysatay warqada M1PR sannadkii hore
Aad ka heshay warqada (CRP) qolada guriga hadii gurigu uu kiro yahay.
Ilaa iyo 1 sanno waa aad la soo daahi kartaa xareysigan warqadaha. Si aad u sheegato lacagta canshuurta kirada ku soo noqota ee 2020, waxa aad haysataa ilaa iyo bisha Ogoosto 15, 2022 si aad u xareysato.
Ka waran hadii qolada gurigu aysan i siin warqada lacagta canshuurta ee (CRP)?
Wac qolada guriga kana codso warqada. Hadii ay taasi shaqeyn waydo, warqad u qor qolada guriga aad ku waydiisanayso ugana sheeg iyaga warqada in loo ganaaxi karo $100 warqad (CRP) kasta oo lacagta kirada ka soo noqoto lagu dalbado oo aysan bixin. Ugu sheeg warqada lacagta kirada ah ee aad bixisay sannadkii 2019. Nuqul kala har warqada aad dirayso.
Hadii qolada guriga aad uga jirtaa aysan wali ku siin waydo warqada lacagta kirada ka soo noqoto lagu dalbado (CRP), kolkaa ka wac Waaxda Canshuuraha (Department of Revenue) khadka ah (651) 296-3781. Ka dib waydiiso inay la xiriiraan qolada guriga ayna ganaaxaan hadii qolada gurigu ay kuu soo diri waydo warqada adiga.
Waaxda Canshuuraha (Department of Revenue) waxa ay ku siin kartaa adiga Foomka Dhaarta Kirada la Bixiyey ah (Rent Paid Affidavit) si aad u buuxiso intii aad sugi lahayd warqada (CRP). Waxa aad u baahan tahay rasiidyo ama wax kale oo cadeyn ah oo ku saabsan inta ay ahayd kirada aad bixisay. Hadii aadan rasiidyo haysan isticmaal hesiishka liiska guriga, warqado guriga kuugu soo dhacay, ama wax kale oo cadeynaya inaad halkaa ku noolayd aadna kiro bixin jirtay. Hadii aad cadeyn karto inaad halkaa ku noolayd, iyo waxa cadadka lacagtu uu ahaa, ku mudac in gobolku uu ka soo qaado in kirada la bixin jiray.
Xaggee ayaan ka heli karaa caawimaad ku saabsan foomamka canshuurta?
Hadii aad uu dakhligaagu hooseeyo, ama aad naafo tahay, ama aad tahay waayeel, waxa aad heli kartaa caawmaad lacag la’aan ah. Si aad u hesho rug caawimaad fidisa oo kuu dhow, ka wac Waaxda Canshuuraha (Department of Revenue), khadka ah (651) 297-3724 ama ka wac hay’ada United Way, lambarkeeda gobolka oo dhan ah, ee ah 2-1-1.